Leviora | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Posts tagged "Leviora"
Home-Miorina Fomba mahafotsy Teeth
ny fomba mahafotsy ny nify
Ny fananana tsara tarehy mangirana mpivady ny nify dia nofy ho an'ny olon-drehetra, raha mbola tahaka ny fantatrareo ny fomba mahafotsy ny nify. Azonao atao ihany koa ny manao ny nify mamirapiratra sy fotsy miaraka amin'ny nify Whitening fitaovana na ny fitsaboana nify. Na izany aza, Whitening nify manaraka misy ireo fomba raha ny tokony ho vidin'ny avo loatra fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka manam-bola. Ary, ireo fomba foana dia tsy manome ny tsara indrindra sy ny tena naniry vokatra. Ankoatra ny-ny-mifanohitra nify Whitening fitaovana sy lafo vidy nify fandidiana, manana safidy iray hafa ny fomba mahafotsy ny nify izay manampy anao maimaim-poana mahazo tasy-, voaravaka perla fotsy nify tsy fametrahana ara-bola misy enta-mavesatra anareo. Ho afaka ny hahafantatra ny fomba mahafotsy ny nify mampiasa an-trano nify Whitening fomba. Home nify Whitening matetika fomba miasa amim-pahombiazana kokoa noho ny hafa fomba. Ankoatra izany, an-trano-teknika mifototra vidin'izany kely ianao fa afaka tokoa manam-bola. Ireto ambany ireto ny fomba ny fomba mahafotsy ny nify amin'ny takatry ny vidiny.
Leviora Misy amin'ny an-dakozia ny saika ny trano rehetra ary manampy ny fomba mahafotsy ny nify. Olona mampiasa fanaova soda ho toy ny tastemaker. Baking soda koa ampiasaina ho fanadiovana tanjona. Tsy miasa amim-pahombiazana mba hanala Mahery be fofona avy amin'ny vata fampangatsiahana. Azonao atao ny mampiasa ny fanaova soda noho ny fanadiovana ny nify. Baking soda dia Marokoroko sy eo amin'ny natiora sy ny endri-javatra ity dia manampy anao manala tasy avy amin'ny ivelany indrindra mankany ambonin'ny ny nify. Ho solon'ny nify Whitening, maka lovia kely sirahazo, vitsivitsy indray mitete ny rano sy ny mando malemilemy-bristled borosy nify. Alao ny soda amin'ny rofia ary hametraka mampisavoana ny rano ho azy io mba hanao Mametaka izany. Ary hanoboka ny borosy nify ho any amin'ny feta sy miborosy nify. Afaka manaraka izany fomba araka izay indray mandeha isan-kerinandro.
Misy voankazo izay manampy ny fomba mahafotsy ny nify; fa frezy miasa ny tsara indrindra mba mahafotsy ny nify. Izany no iray amin'ireo mora indrindra, mahomby sy tsy lafo vidy an-trano nify Whitening fitaovana. Frezy ahitana malic asidra toy ny mavitrika ingredient. Izany organique ingredient dia manampy amin'ny ny fomba mahafotsy ny nify mba hamaha ny stains tsy ho etỳ ambonin'ny ny nify. Fa tsara indrindra vokatra, azonao ampiasaina fanaova soda miaraka amin'ny frezy. Hetezo salantsalany iray salantsalany masaka frezy ho farantsa kely, ka ento ny sekely ao anaty vilia baolina. Ary hametraka antsasaky ny lovia kely sirahazo ny vokatry ary Masy ny mifangaro amin'ny fikororohana mba mifangaro azy tsara mandra-mahazo ny pulpy tapaka. Ankehitriny mampihatra izany fifangaroana eo amin'ny nify amin'ny borosy nify sy miandry mandritra ny minitra vitsy. Avy eo hosasany ny vavanao tsara amin'ny rano tsotra. Afaka manao izany fa indray mandeha isan-kerinandro.
Izany no safidy tsara iray hafa ny ny fomba mahafotsy ny nify ao an-trano. In ny trano maro, izany no ampiasaina hovonoinay ny bibikely fampihenana sy misy dikany scratches. Tsy azo ampiasaina ho toy ny tsara dia tsara nify whitener. Lafo indrindra toothpastes misy peroxyde toy ny lehibe ilaina. Afaka mampiasa azy io ho toy ny miborosy nify sy nify koa whitener. Mandritra ny iray-fahefatra kapoaka ny peroxyde ao amin'ny vavany sy gurgle ho ny iray minitra. Avy eo hosasany ny vavanao tsara amin'ny rano tsotra. Miborosy nify rehefa avy mampiasa peroxyde mba hahazo tsara kokoa ny vokany. Azonao atao ny mampiasa ny peroxyde indray mandeha isan'andro mba hahazoana ny vokatra nandrasana indrindra.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 4, 2016 amin'ny 7:25 AM
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: Leviora, ny fomba mahafotsy ny nify, nify mamiratra, mahafotsy ny nify